Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 19/02/2021)
3 maawa kana 8 maawa – Rwendo rwechitima ndiyo mamiriro akakwana ekuzorora. Kana iwe kazhinji uchinetseka kurara mumigwagwa, yedu 10 matipi ekurara muchitima anoita kuti iwe urare sekacheche. Kubva kuchitima kufamba zvakakosha kune zvemukati matipi pane yakanakisa nzvimbo yeanotapira zviroto pane chero chitima, isu tiri kutanga rwendo kuenda kune anotapira hope!
Paunenge uchiverenga pfungwa dzako dzinoenda kune imwe nzvimbo, marongero, uye kunetseka kwezuva rese kunopera. Kuverenga kukuru kwakanaka kurovedza muviri, taking your mind off any meticulous details. For an hour or two, unokukurwa, uye izvo zvakakwana kukuita iwe kurara uye kurota kure.
BestTipsSleeponTrain hope sleeper SleeperTrainsEurope SleepOnATrain Train Travel chitima kufamba Mazano